Voice of Oromiyaa is a program of news, views, music, culture, history, Oromo language and life of the Oromo people in the Twin Cities. For information, contact Jelil Abdella at [email protected] ________________________ Voice of Oromiyaa and KFAI do not necessarily concur with opinions aired on this or any other Voice of Oromiyaa programs. Voice of […]
Diinqa Oromoo Kutaa 1ffaa Diinqa Oromoo Kutaa 2ffaa
Jarmanii: Sirna kabajiinsa guyyaa gootota Oromoo fi ibsa ejjanno miseensotaa fi deggertoota ABO biyya Jarmanii Nuti kan biyya Jarmanii jiraannu miseensoonii fi deggertotiin ABO Ebla 15 bara 2017, guyyaa gootota Oromoo, sirna oowwaan kabajanneerra. Sirnni kabajaa kun Guyyaa sa`aa 12:00 iraa jalabee hanga 18:00 fufee oole. Sirni kabajaa kun akkumma aadaa qabsoo bilisummaa Oromootti eebba […]